IPod m nwụrụ | Site na Linux
IPod m nwụrụ
Ọ bụ ezie na a raara blog a nye GNU / Linux (ọkacha mma) ọ bụkwa ohere anyị ga-ekwu maka ihe ndị ọzọ, gbasara Technology na ọbụna "nwekwuo onwe" site n'oge ruo n'oge. Nke ahụ bụ ihe blọọgụ bụ, nri?
Dị ka aha nke post kwuru onye m hụrụ n'anya iPod Nano 2G just nwuru. Achọpụtara m ka ọ wedara onwe ya ala, nọrọ jụụ n'otu akụkụ nke ihe m na-ahụ n'abalị. Echere m na ọ nweghị ụgwọ ọ bụla ka m wee tinye ya na PC. Ejikọtara m eriri ọcha ahụ ọ masịrị ya nke ukwuu, Arịrịrị m akọrọ ya na-achọ ịmalitegharị ya (ọ bụrụ na ọ daa) na igodo Menu na bọtịnụ etiti, ma pịa, mana mba, ọ naghị amalite, ọ naghị eme ihe ọ bụla .. Ọ dị ebe ahụ , na-adighi agagharị, ka ... Ọ nwụrụ.
M ka na-echeta oge mbụ m ji ya n’aka. Onweghi onye zụtara m ya, emerie m ya zoo ihe ha mere n’oge ahụ (mgbe m ka na-eji Windows XP) Nnaemeka nakwa na ekekọtara m na onye so na Mexico.
Ma ebe ọ bụ na anyị kwuru banyere ya iPod, Aghọtaghị m ihe kpatara ya Apple anaghị ahapụ mbipute nke iTunes na GNU / Linux. Echere m na n'ikpeazụ ha ga-enwe ọbụna uru karịa. Ọtụtụ ndị ọrụ nke Linux ha nwere a iPod ma obu a iPhone, ọ bụ ezie na Samsung Galaxy SII con android ugbu a n'ahịa, amaghị m. Agbanyeghị, aghọtaghị m ihe kpatara na enweghị ụdị nke iTunes (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na emechiri ya) GNU / Linux.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » IPod m nwụrụ
Nwara aTunes ma ọ bụ gtkpod?
Nwoke ma obughi n'ihi enweghi uzo ozo. Mgbe iPod m dị ndụ, ejiri m Rhythmbox jikwaa ya. Banshee na aru oru, odikwara gi kwuo GtkPod, Hiccup, aTunes and Songbird ..
Mana m aghọtabeghị ihe kpatara Apple enweghị ụdị iTunes maka ndị ọrụ Linux.
Dị mfe, yabụ ị nwere ike ịzụta Mac. Will nwere ike ịgwa m ihe gbasara W $? Ee, mana nke ahụ enweghị ihe ọ bụla gbasara ya, Mac dị mma
N'ezie ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya Apple nwere ike ime nde ole na ole karịa ma ọ bụrụ na ha gụnyere ndị ọrụ Linux. Chefuo ngwaike gi na ngwanro nke abuo ma gbado anya na iTunes + Music Store. A ọrụ (bụla usoro ha na-eji) na ohere iTunes, ga-enwe ike ịzụta music si ya dijitalụ ụlọ ahịa. Ọzọkwa, ọ bụ ezie na ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ, ejiri m n'aka na nke a bụ otu n'ime isi mmalite ego maka Apple.
You ga-azụta na yourlọ Ahịa Egwu gị ị nwere ike iwunye ahịa ọ bụla p2p? Achọrọ m ịzụta CD nke mbụ, mana ha bụ nke anụ ahụ, na-akwụ ụgwọ maka ihe na-abụghị nke anụ ahụ ma nwee ike ibudata ya dịka anaghị m aghọta ya
Elp 1692 dijo
Zụta android na voila, o nwere ọtụtụ ọrụ, ọ dị mma ma dịkwa ọnụ ala karịa ipod / iphone nwere oke limited
Ee n'ezie, ọ bụrụ na m nwere ike ịme ya .. 🙁
Have nwere ha maka € 75, enwere mbadamba ego ahụ
Anaghị m azụ iPod na Linux ọzọ, ọbụlagodi ruo mgbe m nwere ezigbo nkwado. Onwe m achoghi m ịdabere na ngwa oru dika itunes, na tuna ma obu gtkpod adighi aru oru. Hazi ipod vidiyo m nwere ike iji Rhythmbox, mana Shuffle m enweghị ike.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iweghachi iPod na Linux, ọ ga - abụ ezigbo nro. Anaghi m eso ipod ozo.
Na $ huffle m nwere ike, mana maka na ọ baghị uru, ekwenyere m, enwere ọtụtụ Mp3 / Mp4 n'ahịa na-arụ otu ọrụ ahụ obere
Ọfọn, njikwa na Banshee enweghị ọnwụ. Ọ dị mma, mana m ga-ekwu maka nke a na post. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na m nwere ike ịhọrọ onye ọkpụkpọ wee zụta ya (nke m na-enweghị ike), olee ụzọ ndị ọzọ nwere ogo (ọkachasị egwu) nke iPod? Kedu ihe dị iche iche na gam akporo dịka ọmụmaatụ?
Ihe dị iche na ụda dị mma abụghị ihe dị njọ, otu na-agwa gị na n'enweghị nsogbu ọ bụla na-egosi mmalite nke guitar, gịnị kpatara na ị gaghị eme nke ahụ? LOL
LOL !!! Ugbu a na-egosi ihe ọdịiche dị ka nke ahụ? Ka anyị lee ... ị chetara Google Doodle nke guitar? Kedụ guitar nke ahụ hụrụ? LOL !!!
Ọ bụ eziokwu, ekwetaghị m na iPod bụ panacea egwu, ọnụahịa nke ndị ọzọ doro anya, gịnị kpatara ịzụta ya? Ọ bụrụ na mgbe ịzụrụ ihe site na apụl n'echi ya ha hapụ nsụgharị ọhụrụ na nke ochie enweghịzi nkwado. Maka nke ahụ, agara m na Media Markt ma ọ bụ Fnac wee zụta Mp4 nke mbụ maka € 25 nke m na-ahụ kama ịzụrụ iPod Touch nke na-efu ihe karịrị € 200 ma ọ bụrụ na ngụkọta ga-arụ otu ọrụ ahụ, yana enweghị ịwụnye mmemme ụfọdụ
Anụbeghị m abụ ahụ ị na-ekwu, m na-asị na m na-amata ọdịiche sitere na mmalite, mana ọ bụghị mgbe niile ka ụdị nke ezigbo
Dx Wine, ma ọ bụ otu esi esi tinye Wine DirectX
Etu esi ahazi SOCKS proxy na KDE